Dai 22, 2021 by Justin26
Meseji ndeyeApple's mameseji app inowanikwa iPhone, iPad, iPod Touch uye Mac, asi haisi yemameseji eSMS chete uye iMessages, pane huwandu hwezvinhu mukati meapp.
Meseji dzinogona kushandiswa pamidziyo yakawanda, kuyananisa pakati pavo vese kana dzasainwa muiyo imwechete Apple ID Heano edu akanakisa matipi uye manomano ekukubatsira iwe kuwana zvakanyanyisa kubva kuMessages uye yayo chikuva.
Yedu yepamusoro manomwe akanakisa iMessage manomano
Maitiro ekupindura kune imwe meseji
Vhura iyo Messages app> Vhura mesage tambo yemunhu ane meseji iwe yaunoda kupindura zvakananga> Dhinda uye bata pane meseji iwe yaunoda kupindura zvakananga kuna> Tapira Pindura> Pinda meseji yako> Press tumira.
Iwe meseji ichaonekwa pamwe neyekutanga meseji pamusoro payo.
Maitiro ekudzima akaverenga maretiiti eimwe nhare paMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kudzima maresiti ekuti abvise> Tinya pazita rekubatana riri pamusoro peye tambo yemeseji> Dzvanya pane yeruzivo icon> Bvisa 'Send Verenga maRisiti'.
Maitiro ekusvetukira kune yekutanga meseji paMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kuona iyo yekutanga iMessage yakatumirwa kubva> Tapira pane iyo nguva sitampu pamusoro pechiratidziro chako uye iwe uchaendeswa kune wekutanga meseji.
Uku kunyengera kunoshanda zvakare kukudzosera iwe kune ako achangopfuura mameseji tambo kana iwe wakatsikisa pasi.
Nyora mameseji ako anozivikanwa kumusoro
Vhura iyo Messages app> Rova zvakasimba kuruboshwe kurudyi pane meseji tambo yemunhu waunoda kupinha kumusoro kwemameseji ako> Tinya yero pini bhatani. Tsamba yako yemeseji nemunhu uyu ichaonekwa mudenderedzwa kumusoro. Unogona kubaya tambo dzemashoko matanhatu.
Kubvisa tambo, batisisa denderedzwa remunhu waunoda kusunungura uye sarudza kusunungura.
Maitiro ekutumira GIF muMessage
Vhura iyo Messages app> Tinya pane tambo yemunhu waunoda kutumira GIF kwaari kana kutanga mutsva meseji> Tora pane yekuisa munda> Vimba pane App Store icon> Tinya pane pink pikicha negirazi rinokudza mubhawa. pamusoro pekhibhodi> Nyora mubhokisi rekutsvaga iyo yeGIF yaunoda kana kupuruzira pasi sarudzo> Sarudza yako GIF> Dhinda museve mukona yekurudyi yemessage bhokisi rekutumira.
Maitiro ekumisa zviziviso kubva kune yakatarwa meseji tambo iMessage
Vhura iwo Meseji app> Rova kurudyi kuruboshwe pane tambo yemeseji iwe yaunoda kuzivisa zvisizvo kubva> Dzvanya bhero chiratidzo> A Usakanganise chiratidzo (hafu yemwedzi) ichaonekwa kuruboshwe kwetambo tambo dzawakamisa zviziviso kubva.
Kuti uwane nyevero kumashure, tsvaira kurudyi kuenda kuruboshwe pane tambo yemeseji zvakare uye tinya tinya bhero chiratidzo zvakare.
Maitiro ekutumira yako yazvino nzvimbo ine wekubata paMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kugovana nzvimbo yako pamwe> Tinya pazita rekubatana riri pamusoro peyemeseji tambo> Tinya pane ruzivo icon> Tumira yangu Ino Nzvimbo.
General iMessage matipi uye manomano
Maitiro ekugadzirisa rako zita uye pikicha muMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya paHedha kumusoro kwekona yekona> Sarudza Hora Zita uye Photo> Tinya pa 'Hora' pasi pemufananidzo kuti uchinje pikicha> Chinja zita rako nekukwira pazita rekutanga nesurname.
Maitiro ekunyora meseji muMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kutumira meseji yakanyorwa kuti> Tendeuka yako iPhone yakatwasuka> Dzvanya pane squiggly mutsetse mukona yezasi yekona yekhibhodi kana iyo chena nzvimbo isingaoneke ipapo ipapo > Tanga kudhirowa kana kusarudza imwe yema-pre-akanyorwa mameseji> Dhinda 'Done' pakona yepamusoro kurudyi> Vimba pamuseve wekutumira.
Maitiro ekudzima imwe chete tambo tambo muMessage
Vhura iyo Messages app> Rova zvakasimba kurudyi kuruboshwe pane meseji tambo iwe yaunoda kudzima> Dzvanya tsvuku bhini icon> Simbisa kudzima.
Maitiro ekudzima akawanda mameseji tambo mune iMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya paHedha kumusoro kwekona yekona> Tinya pane Sarudza Meseji> Sarudza iwo mameseji tambo dzaunoda kudzima> Dzvanya 'Delete' mukona yezasi yekona.
Maitiro ekudzima iwo wega meseji mune tambo tambo pane iMessage
Vhura iyo Messages app> Vhura tambo yemeseji iwe yaunoda kudzima yega meseji kubva> Dhinda uye bata iyo yega meseji iwe yaunoda kudzima> Dzvanya 'Zvimwe' pazasi peye pop up menyu> Sarudza chero imwe meseji iwe yaunoda kusarudza kudzima, kana paine> Dzvanya pabhini icon mukona yezasi kuruboshwe rweapp.
Maitiro ekutumira meseji nyowani muApple Meseji
Vhura iyo Messages app> Tinya pachivara nepenzura mukona yepamusoro kurudyi> Kutanga kutaipa zita remubatanidzi> Tinya pane iye wekubatana kubva pane iyo rondedzero> Kutanga kutaipa meseji yako mubhokisi remashoko pamusoro pekiyi> Dzvanya museve kurudyi mukati mebhokisi remashoko kutumira.
Maitiro ekutumira meseji yeboka pane iMessage
Vhura iyo Messages app> Tinya pachivara nepenzura mukona yepamusoro kurudyi> Tanga kutaipa zita remubatanidzi> Tinya pane iye wekubatana kubva pane chinyorwa> Nyora rimwe zita uye sarudza wekubata> Dzokorora kudzamara wawedzera ese mazita ekubatana iwe unoda kuve muboka reMessage.
Iyo yakanyanya kuwanda nhamba, kana iMessage yeboka chat chat, ndeye makumi matatu nemasere.
Maitiro ekuita FaceTime kufona kubva kuMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kuFaceTime (inoda kuve iOS mushandisi)> Tinya pazita rekubata riri pamusoro peye tambo yemeseji> Tapira pa 'FaceTime'.
Maitiro ekuita odhiyo odana kubva iMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kufonera> Tinya pazita rekubata riri pamusoro peye tambo yemeseji> Tapira pa 'Audio'.
Maitiro ekugovana nzvimbo yako neyekubata paMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kugovana nzvimbo yako yazvino> Tapira pazita rekubata riri pamusoro peye tambo yemeseji> Tinya pane ruzivo icon> Govera yangu Nzvimbo> Sarudza pakati 'Goverana Iawa Imwe ',' Goverana Kusvikira Kupera Kwezuva 'uye' Goverana Nekusingaperi '.
Kana iwe ukasarudza 'Goverana Nekusingaperi', iwe unozoonekwa mune iwo ekubatika Tsvaga App yangu, uye ivo zvakare vanozoona nzvimbo yako pamusoro pechiratidziro chavo pavanobaya chiratidzo cheruzivo pasi pezita rako rekubata mune yako tambo meseji mune yavo Meseji app.
Maitiro ekuona mafoto uye zvakabatanidzwa mukati meshinda tambo pane iMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kuwona mifananidzo uye zvakabatanidzwa zvakatumirwa kubva uye kwauri> Tinya pazita rekubata riri pamusoro peye tambo yemeseji> Dzvanya pane ruzivo icon> Mifananidzo, zvinongedzo uye zvakabatanidzwa zvinoonekwa pazasi.
Ndeupi musiyano uripo pakati pebhuruu uye bhuruu meseji muApple Meseji?
Meseji ichaonekwa yebhuruu kune iMessage uye green kune SMS meseji. Kazhinji chero meseji inotumirwa pakati peaIOS zvishandiso ichave yebhuruu (kana iye anogamuchira aine iMessage yakavhurwa) asi seMessage inodawo kubatana kweinternet, pano neapo unozovaona vachiratidzika vari vegirinhi kana iwe kana iye anenge achigamuchira asina internet inoshanda .
Meseji dzakatumirwa pakati pe iOS device uye Android or Windows chishandiso chinogara chichionekwa chiri chegirini.
Maitiro ekutumira mutsva odhiyo meseji muMessage
Vhura iyo Meseji app> Tinya pachivara nepenzura mukona yepamusoro kurudyi> Tanga kutaipa zita remubatanidzi> Dzvanya pane waunobata kubva pane runyorwa> Dhinda uye ubatise iyo odhiyo icon mukati medenderedzwa kurudyi kwemessage bhokisi pamusoro keyboard> Taura meseji yako.
Iwe unozobva waita sarudzo yekutamba zvakarekodhwa meseji yako yekuteerera nekurova bhatani rekutamba mukati megrey bar kurudyi kwebhokisi meseji, uitumire nekudzvanya museve pamusoro pegrey bar kurudyi, kana kukanzura na kudzvanya iyo 'x' mukati medenderedzwa kuruboshwe kwebhokisi remashoko.
Maitiro ekutumira mufananidzo muMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kutumira pikicha kana kutanga mutsva meseji> Tora pane kamera kamera kuruboshwe kwebhokisi remeseji pamusoro pekhibhodi> Tora pikicha uye tora museve mukati pasi kurudyi kana iwe uchifara kana kubaya pane iyo gallery icon kumusoro kwekuruboshwe kwescreen yako uye sarudza pikicha yaunoda kutumira> Wedzera chero zvirevo> Dhinda museve kurudyi kwebhokisi meseji yekutumira.
Neimwe nzira, kana uri mufananidzo wawakatotora iwe waunoda kutumira, unogona kushandisa iMessages Apps. Pane imwe nguva mune tambo tambo yemunhu waunoda kutumira iyo pikicha kuna> Tapira pa Apple Mifananidzo icon pamusoro pekhibhodi uye pazasi pebhokisi remeseji> Tsvaga kuburikidza nemifananidzo yako nekupururudza kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kana tora pane 'Mifananidzo Yese' kuti uwane yakazara skrini kutarisisa kweiyo Photos app uye ako ese maalbhamu> Sarudza iyo foto> Dhinda museve pane kurudyi kwemessage bhokisi rekutumira.
Apple Mifananidzo matipi uye manomano
Maitiro ekuraira meseji muMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo yemunhu waunoda kutumira meseji kana kutanga meseji nyowani> Tinya pane maikorofoni icon mukona yezasi yekona yeapp pasi pekhibhodi> Kutanga kutaura uye zvaunoti zvicha tanga kuoneka mubhokisi remashoko pamusoro pekhibhodi.
Iwe unogona kutaura zvinhu zvakaita se "Full Stop" uye "Comma" ye punctuation kana iwe unogona kuiwedzera usati warova museve kutumira meseji.
Maitiro ekumaka tambo dzakawanda tambo sekuverenga muMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya paHedha kumusoro kwekona yekona> Tinya pane Sarudza mameseji> Sarudza iwo mameseji tambo iwe dzaunoda kumaka sekuverengwa> Dzvanya 'Verenga' mukona yezasi yekona.
Maitiro ekutsvaga muApple Meseji
Vhura iyo Messages app> Svetera pasi kubva kumusoro kuti uone yekutsvaga bar> Nyora zvauri kutsvaga mubha yekutsvaga pamusoro peiyo mameseji tambo> Chero mameseji ane chekuita nezvauri kutsvaga anozoonekwa pazasi pebhawa.
Maitiro ekutumira wega meseji mune tambo tambo iMessage
Vhura iyo Messages app> Vhura tambo yemeseji iwe yaunoda kutumira yega meseji kubva> Dhinda uye bata iwo wega meseji iwe waunoda kutumira> Dzvanya 'Zvimwe' pasi pechiso chako> Sarudza chero imwe meseji iwe yaunoda kutumira, kana chero> Sarudza museve wakakombama muzasi kurudyi kwescreen.
Zvemukati meiyo meseji yakatumirwa, kana mameseji, anozoonekwa mune mutsva meseji uko kwaunogona kuwedzera zita remugashiri kumusoro uye rova ​​museve kurudyi kwebhokisi meseji yekutumira.
Maitiro ekutumira Animoji kana Memoji pane iMessage
Vhura iyo Messages app> Vimba pane meseji tambo yemunhu waunoda kutumira an Animoji ku, kana kugadzira meseji nyowani> Sarudza iyo Animoji / Memoji icon mubhawa pamusoro pekhibhodi (Memoji ine yero furemu)> Tsvaga yakatenderera kuti usarudze Animoji yaunoda kutumira> Uya nechiso chako mukutarisa> Dzvanya uye ubatise bhatani dzvuku mukona yezasi yekurudyi yeAnimoji kuti utore meseji inosvika masekondi makumi matatu pakureba> Dzvanya museve kuti utumire kana iwe uchifara.
Maitiro ekutumira Memoji pane iMessage
Vhura iyo Messages app> Vimba pane meseji tambo yemunhu waunoda kutumira an Memoji ku, kana kugadzira meseji nyowani> Sarudza iyo Animoji / Memoji icon pamusoro pekhibhodi> Sarudza Memoji yako kana kudzvanya madonhwe matatu ari mudenderedzwa kuti ugadzire Memoji nyowani> Dhinda museve wekutumira.
Maitiro ekuita kune yega meseji muMessage
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane tambo yemeseji yemunhu akutumira iwo wega meseji iwe yaunoda 'kuitisa' kune> Dhinda uye bata iwo wega meseji iwe yaunoda kuitisa> Sarudza pakati pemwoyo, zvigunwe kumusoro, zvigunwe pasi, Haha, kakapamhamha kaviri kana mucherechedzo wemubvunzo.
Maitiro ekutumira meseji seSMS kana iMessage isipo
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Toggle pa 'Tumira seSMS'.
Nzira yekunzwa mameseji ekuteerera nekukurumidza paMessage
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Bhura pasi pasi kune Chikamu cheMashoko Meseji> Toggle pa 'Simudza Kuti Uterere'. Kana iri, mameseji ekuridza anozoridzwa nekukurumidza paunosimudza yako iPhone kunzeve yako.
Maitiro ekuvhura kana kudzima mameseji eMMS pane Apple Meseji
Ndichiri kutumira pikicha seMessage yemahara, hazvisi kana iwe ukatumira imwe seye meseji - uri nani kushandisa sevhisi senge WhatsApp pakati peIOS uye Android zvishandiso kana iwe uchida kutumira pikicha.
Zvakadaro, kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti unogara uchigamuchira mifanikiso yemifananidzo kana isina kutumirwa kuburikidza neMessage:
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuMemessage> Bhura pasi pasi kuSMS / MMS chikamu> Shandura 'MMS Messaging' kuvhura, kana kudzima zvichienderana nezvaunoda.
iMessage Notices matipi uye manomano
Maitiro ekuvhura kana kuvharisa previews yeMessage
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi kusvika ku'Ziviso '> Bhura pasi pasi kune' Meseji '> Bhura pasi kuzasi kweChisarudzo chikamu> Dzvanya pa' Ratidza Zviratidzo '> Sarudza pakati' Nguva Dzose ', Kana' Chakavhurwa 'kana' Hazvimboiti '
Maitiro ekuronga Notisi yeMessage yeMessage
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Notifications'> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Bhura pasi pasi kune Chikamu cheSarudzo> Tapira pa 'Notification Grouping'> Sarudza pakati pe 'Otomatiki', 'NeApp' kana 'Bvisa'.
Kana zviripo, akawanda mameseji ezaziso anozoonekwa seboka rakarongedzwa rezviziviso kubvumidza kune zvimwe zviyeuchidzo kubva kune akasiyana maapps pane yako yakavharwa skrini.
Maitiro ekuvhura kana kudzima zviziviso zveMessage
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kune 'Notifications'> Bhura pasi pasi kune 'Meseji'> Toggle 'Bvumira Notifications' kuvhura kana kudzima.
Maitiro ekumisa iMessage Notices dzinoonekwa munzvimbo yako yekuzivisa
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kune 'Notifications'> Bhura pasi pasi kune 'Meseji'> Bvisa iro 'Notification Center' bhokisi pasi pechikamu cheAlerts.
Maitiro ekumisa iMessage Notices dzinoonekwa pane yako yekukiya skrini
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kune 'Notifications'> Bhura pasi pasi kune 'Meseji'> Bvisa iro 'Lock Screen' bhokisi pasi pechikamu cheAlerts.
Maitiro ekumisa mabhenji machenjedzo eMessage Notices kana foni yako isina kuvhurwa
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kune 'Notifications'> Bhura pasi pasi kune 'Meseji'> Bvisa iro 'Mabhanhire' bhokisi pasi pechikamu cheAlerts.
Maitiro ekudzokorora zviyeuchidzo zveMessage Notices
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi kusvika ku'Ziviso '> Bhura pasi pasi kune' Meseji '> Bhura pasi pasi kune Chikamu cheSarudzo> Tapira pa' Dzokorora Nyevero '> Sarudza pakati pa' Never ',' Kamwe ',' Kaviri ',' 3 Times ', '5 Nguva' kana '10 Nguva '.
iMessage zvakavanzika matipi uye manomano
Maitiro ekuvhura kana kuverenga maRisiti kana kudzima paMessages
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Toggle on or off 'Send Read Receipts'.
Kana Verenga maRisiti aripo, vanhu vanozoona 'Verenga' mune grey pazasi meseji yavakakutumira iwe paunovhura.
Maitiro ekudzima iMessage kudzima
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Toggle 'iMessage' yabviswa.
iMessages inogona kutumirwa pakati iPhone, iPod, iPad uye Mac namano.
Maitiro ekudzoreredza iMessage kumashure
Vhura Zvirongwa> Mupumburu pasi kune 'Meseji'> Toggle 'iMessage' on.
Maitiro ekushandura ekutaurirana mapikicha kana kudzima paMessage
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Toggle 'Ratidza Kutaurirana Mapikicha' kuvhura kana kudzima.
Maitiro ekugadzirisa kuti ndeapi maakaundi aunotumira uye kugamuchira iMessages kubva
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Dzvanya pa 'Tumira & Gamuchira'> Sarudza maakaunzi aunoda kugamuchira iMessages uye kupindura kubva> Sarudza maakaunzi aunoda kutanga nhaurirano kubva.
Nzira yekudzivirira sei kuonana neMessage
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Bhura pasi pasi kuti 'Wakavharirwa'> Wedzera iyo yekubata kana nhamba yaunoda kuvharira.
Cherechedza: Kana iwe ukavhara munhu, haugamuchire nhare, mameseji kana FaceTime kufona kubva kuvanhu vari pane block block.
Ungachinja sei marefu mameseji akachengetwa paMessage
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Bhura pasi pasi kune Chikamu cheMessage Nhoroondo> Tinya pane 'Chengeta Meseji'> Sarudza pakati pe '30 mazuva ',' 1 gore 'uye' Nokusingaperi '.
Maitiro ekudzima zviyeuchidzo zveMessages kubva kuvanhu vasiri mune yako yekubata runyorwa
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Bhura pasi pasi kune Chikamu Chekusefa Meseji> Toggle pa 'Sefa Vasingazivikanwe Vanotumira'.
Meseji dzinobva kuvanhu vasiri mune yako yekunyora runyorwa dzinozobva dzarongedzwa mune rakasiyana runyorwa.
Ungachinja sei marefu ekutumira meseji akachengetwa paApple Meseji
Vhura Zvirongwa> Bhura pasi pasi kuti 'Meseji'> Bhura pasi pasi kune Chikamu cheMashoko Meseji> Vimba pane 'Kupera'> Sarudza pakati 'Mushure memaminetsi maviri' kana 'Usambofa'.
iMessage Apps matipi uye manomano
Maitiro ekurodha pasi iMessages maapplication muApple Meseji
Apple yakabatanidza iyo App Store muApple Meseji muIOS 10, ichibvumira vashandisi kurodha maapplication senge Citymapper, Google Photos uye Dropbox, pamwe nemitambo, yekushandisa mukati meMessage. Unogona kuverenga zvimwe iMessage apps uye akanakisa kudhaunirodha mune yedu yega ficha.
Kuchengeta iMessage app: Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane meseji tambo> Dzvanya paApp Store icon kuruboshwe kwebhokisi remashoko> Tapira paApp Store icon mubhawa riri pamusoro pekhibhodi> Tsvaga iyo app yaunoda kana kupururudza sarudzo dzakakurudzirwa> Dhawunirodha.
Maitiro ekudzima iMessage app paApple Messages
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane chero tambo meseji> Bhurawuza kuburikidza neapp bar pamusoro pekhibhodi kusvika iwe usvike kune 'Zvimwe' icon ine matatu grey madota mune chena oval> Dhinda 'Hora' mukona yekurudyi kona> Rova kurudyi kuruboshwe paapp iwe yaunoda kuidzima kana kuibvisa kana uchida kuibvisa kwenguva pfupi kubva kubha reapp.
Maitiro ekugadzirisa zvakare iMessage apps paApple Meseji
Vhura iyo Messages app> Dzvanya pane chero tambo meseji> Tenderera kuburikidza neapp bar pamusoro pekhibhodi kusvika iwe usvike kune 'Zvimwe' icon ine matatu grey madota mune chena oval> Dhinda 'Hora' pakona yepamusoro kurudyi. Unogona kudzoreredza pamusoro mashanu maapplication nekuvafambisa kumusoro uye pasi zvinoenderana nezvaunoda.
Kuti uchinje kuti ndeapi maapplication anoonekwa mune mashanu epamusoro, iwe uchafanirwa kudzvanya denderedzwa dzvuku kuruboshwe rweapp mukati memashanu epamusoro kuti ubvise uye denderedzwa regirini kuruboshwe rweapp mune irwo pazasi raunoda kuwedzera. .
Maitiro ekutamba mitambo paMessage
Vhura iyo Messages app> Vhura chero meseji tambo> Dzvanya paApp Store icon pamusoro pekhibhodi> Tinya pane yekutsvaga icon kurudyi kwemApp App zvinyorwa> Type mumutambo waunoda kutamba> Dhawunirodha.
Vhura tambo yemeseji yemunhu waunoda kutamba naye mutambo> Vimba pane icon yemutambo mubhawa reapp pamusoro pekhibhodi> Tamba mutambo.
Maitiro ekuti utambe Mazwi neShamwari muMessage
Vhura iyo Messages app> Vhura chero meseji tambo> Dzvanya paApp Store icon pamusoro pekhibhodi> Tinya pane yekutsvaga icon kurudyi kwemApp App zvinyorwa> Mazwi neShamwari> Dhawunirodha Mashoko eMessage Game.
Vhura tambo yemeseji yemunhu waunoda kutamba Mazwi neShamwari na> Tinya paIzwi app mubhawa pamusoro pekhibhodi> Tamba kure.
iMessages matipi uye manomano eMac
Maitiro ekuratidza yako mameseji mameseji eSMS pane yako Mac kana iPad
iMessages inowirirana otomatiki kune Mac kana iPad yakasainwa mukati pane imwechete Apple ID uye neMessage yakashandurwa, asi mameseji asiri. Kuti uone mameseji anotumirwa kunhamba inosanganiswa neakaundi yako yeMessage:
Vhura Zvirongwa (pa iPhone)> Bhura pasi kusvika kuMessage> Tapira paMeseji Meseji Kutumira> Chinja zvishandiso zviri mune runyorwa iwe rwaunoda kubvumidza kutumira uye kugamuchira mameseji kubva ku iPhone yako.
Unodzima sei iMessage Notices paMac
Tinya paApple iri kumusoro kuruboshwe kwekuratidzira> Vhura Sarudzo dzeSystem> Tapira pa 'Notifications'> Bhura pasi ku 'Meseji'> Bvisa 'Bvumira Notifications kubva kuMessage'.
Maitiro ekudzima iMessage previews paMac
Tinya paApple iri kumusoro kuruboshwe kwekuratidzira> Vhura Sarudzo dzeSystem> Tapira pa 'Notifications'> Bhura pasi pasi kune 'Meseji'> Untick 'Show Notification Preview'.
Maitiro ekuvhura kana kuverenga mareti ekuverenga kana kudzima eMessages paMac
Vhura iyo Messages app pane yako Mac> Vhura mameseji mameseji kumusoro kwekuruboshwe kwekuratidzira> Vhura Zvaunoda> Sarudza iyo iMessages tebhu> Maka kana kusunungura akaverengwa mareti bhokisi pasi pezvaunoda bhokisi.
Kana iwe waifarira izvi, unogona verenga edu Apple Mifananidzo matipi uye manomano kuti utangezve iyo Photos app zvakare.
Maitiro ekutumira mameseji pane iyo iPhone
iMessage Haisi Kushanda? Maitiro ekugadzirisa iMessage pa iPhone, iPad & Mac
Apple Mapikicha matipi uye matipi: Kuchengeta, kugadzirisa uye kugovera yako iPhone mafoto